The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
8:42:00 AM 2014, The Hunger Games, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်2comments
ဆိုဒ်အဟောင်းမှာတုန်းက တင်ပြီးပြီ ထင်ပါတယ်.. မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တောင်းဆိုထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဇာတ်လမ်းကတော့ အရင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့မတူတော့ပါဘူး။ Hunger Game တွေမလာတော့ပဲနဲ့ ဒီကားက နိုင်ငံရေးတွေပါလာပြီး၊ လူတွေ ထကြွပုံကန်ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီကားကို စာအုပ်ဖတ်ထားဖူးတဲ့ သူတွေက ကြိုက်ကြမှာဖြစ်ပြီး၊ သာမန်ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ကတော့ အနည်းငယ် ပျင်းဖို့ကောင်းမှာပါ။ ဒုတိယဇာတ်ကား Hunger Games: Catching Fire အပြီးမှာ Katniss က Hunger Games Stadium ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတဲ့ နောက်ကနေဆက်ထားပါတယ်။ Katniss ကို ကယ်တင်ပြီးတဲ့နောက် သူမကို District 13 ကိုပြန်ခေါ်သွားပြီး သူပုန်ခေါင်းဆောင် President Alma Coin နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းမှာ President Coin က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေမယ့် ပြည်သူတွေအကုန် ပူးပေါင်း ပြီး နေပြည်တော်ကို (Capitol) တွန်းလှန်ဖို့ဆိုရင်၊ ပြည်သူတွေ မျက်စိထဲမှာ လူစွမ်းကောင်းလို့ မြင်နေတဲ့ Katniss ကို ဦးဆောင်ခိုင်းမှ၊ Katniss ပါ ပါဝင်ပြီး တွန်းလှန်မှာ လူတွေအကုန် သူမနောက်က ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက The Hunger Games: Mockingjay Part2အတွက် အရှိန်ယူနေတာဖြစ်လို့ Catching Fire လောက်မကောင်းပေမယ့်၊ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ကတော့ ကောင်းပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ပီပြင်သလို ကလေးအကြိုက်စာအုပ်ကို ရုပ်ရှင် ပြန်ရိုက်ထားတယ်လို့ မထင်ရအောင် ဇာတ်ညွှန်းတွေကလည်း ကောင်းလှပါတယ်။ ဒီ Hunger Games စာအုပ်တွေက ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် အဓိက ထုတ်ဝေထားတာဖြစ်တာကြောင့် ဇာတ်လမ်းအားဖြင့်တော့ အရမ်းကြီးမကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်က လူတိုင်း ကြည့်လို့ ရအောင် ပညာသားပါပါရိုက်ကူးထားနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဒီကားမှာ ပရိတ်သတ်အချို့ နဲ့ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူတွေ အမြင်နှစ်မျိုးကွဲနေကြတာရှိပါတယ်။ ဒီကားမှာ Katniss က Peter ကိုပဲ တစ်ချိန်လုံး လိုက်ရှာနေပြီး၊ Peter ကိုမှ ခေါ်မလာပေးရင်၊ မကယ်တင်ပေးရင်၊ သူမလည်း လူတွေကို ဦးမဆောင်ဖူးလို့ တောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချို့သူတွေက ဒီလို Sci-fi/Action ဇာတ်ကားမှာ ကလေးကလား အချစ် ဇာတ်လမ်းကို မရမက ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတာကို ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ Katniss က ရုတ်တရက် သူမ လုံးမသိထားတဲ့ တော်လှန်ရေးထဲကို ဆွဲသွင်းခံလိုက်ရပြီး၊ ဘုမသိဘမသိ ဖြစ်နေသလို၊ သူမ မရင်းနှီးတဲ့ လူတွေ ခိုင်းတာလုပ်နေရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Peter က ပထမဇာတ်ကားမှာထဲက သူမ နဲ့အတူ သေဖော်သေဖက် အဖြစ်ရှိနေခဲ့တာကြောင့် ဒီလို အချိန်မှာ သူမအနေနဲ့ အမေနဲ့ညီမအပြင် တွယ်တာစရာ Peter ကိုပဲ ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ဆယ်ကျော်သက်အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုး၊ မြန်မာအချစ်ဇာတ်ကားမျိုး ဖြစ်သွားပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအရ ပါသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ပထမနှစ်ကားလောက် အက်ရှင်မများပေမယ့် Hunger Games ဇာတ်ကားကို ကြိုက်သူတွေကတော့ နှစ်သက်ကြမှာပါ။ No Sex, No Nudity ဖြစ်ပြီး မိသားစု တူတူကြည့် နိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ကို စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာစေအောင် ညွှန်ပြပေးမယ့် ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
#Sololay ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်မှ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..
vidzi ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီလင့်ကနေ
srt by: Lotus Black
chan nyein March 21, 2015 at 9:15 AM
ကျနော် movie မှာ subtitle by: Lotus Black ဆိုတာ ကျနော်မဖျက်ပါဘူး။ရုပ်ရှင်ဖွင့်တာနဲ့ subtitle by: Lotus Black ဆိုတာ အရင်ဆုံးတွေ့ရမှာပါ..။ ပို့စ်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ မပါတာကတော့ ပို့စ်တခုကို မူသေထားပြီး တင်တာမို့
ကျန်ခဲ့တာ ပါ..။တမင်ရည်ရွယ်ပြီး ထားတာမဟုတ်ပါဘူး..။ အကို့ srt ဖိုင်တွေ ယူသုံးတာ မကြိုက်ရင် အားမနာပါနဲ့ ပြောပါ..။ ကျနော်လိုချင်တဲ့ စာဖိုင်တွေကို http://subscene.com/ မှာရှာရင်း အကို ပြန်ပြီးသားတွေ ဘယ်သူပြန်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယူသုံးပါတယ်..။ srt by: ဆိုပြီး ပို့စ်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ srt ယူတဲ့ လင့်ကို ပြန်ချိပ်ပေးပါတယ်။ မပါခဲ့ရင်လည်း မထည့််ထားတာလို့ မထင်စေချင်ပါ..။ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ကျနော်တင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ subtitle by: Lotus Black ဆိုတာ မသိတဲ့သူ မရှိလောက်ပါဘူး..။
Michael Scofield March 23, 2015 at 4:33 AM
ีကို Lotus Black ရေ ကိုချမ်းငြိမ်းပြောတာမှန်ပါတယ် အစ်ကို ၊ ကျွန်တော်က ဒီက movie တွေကို တစ်နေတစ်ကား ပုံမှန်ကြည့်
တဲ့ ဂ၇ိတ်သတ် တစ်ယောက်ပါ. ကိုချမ်းငြိမ်း ပြောသလို Movie ထဲမှာ ဇာတ်လမ်း စတာနဲ့ Subtitle by : Lotus Black ဆိုတာ
ကို အရင်ဆုံး ထည့်ထားပေးပါတယ် အစ်ကို ဘာသာပြန်တဲ့ Sub ဖိုင် သုံးတဲ့ Movie တိုင်း မှာ ပါပါတယ် ခင်ဗျာ................
post ထဲမှာ Credit မပေးတာက မေ့သွားလို့လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..... ဒါပေမယ့် Movie ထဲမှာတော့ Subtitle by : Lotus Black ဆိုတာကိုတော့ အမြဲတမ်း ပါ ပါတယ်......... ကိုချမ်းငြိမ်း နဲ့ ကိုLotus Black တို့ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Charlie Chaplin - The Kids (1921) အဖေများနေ့ အမှတ်...
RoboCop (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Hunger Games (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014) မြန်မ...
The Hunger Games: Catching Fire (2013) မြန်မာစာတန...
Mr Peabody And Sherman (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
AVS Video Converter 9.0 ( မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင...
Drive Angry (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Host (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Devil Inside (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dragon Blade (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Conan the Barbarian (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
3 Idiots (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
PK (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Like Stars on Earth (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Thor: 2- The Dark World (2013) ( မြန်မာစာတန်းထိုး ...
Hansel & Gretel Witch Hunters (2013)မြန်မာစာတန်းထု...
Apocalypse Pompeii (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Pompeii (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Samsara (2001) မြန်မာစာတန်းထိုး
How to Train Your Dragon2(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး...
How to Train Your Dragon 1 (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး...
The Last Tycoon (2012)မြန်မာစာတန်းထိုး